UDan Brown Biography kunye neencwadi eziGqwesileyo | Uncwadi lwangoku
Emuva ngo-2003, incwadi eyayibizwa ngokuba yi -Da Vinci Code ayifikanga nje kuphela ukuze ithengise kakhulu kwaye inyikimise iziseko zeCawa, kodwa ivule umkhuhlane wamazwi aphengulule uncwadi olugcwele iimfihlo. Uloyiso olunegama lombhali othile waseMelika owaba ngomnye wabo uninzi lwababhali abathengisa izinto ezininzi Lweminyaka Eliwaka. Masichaze ii-enigmas ngokusebenzisa UDan Brown ngobomi bakhe kunye neencwadi zakhe ezilungileyo.
1 UDan Brown Biography
2 Iincwadi ezigqwesileyo zikaDan Brown
2.1 Ikhowudi yeDa Vinci
2.2 Iingelosi kunye needemon
2.3 Uphawu olulahlekileyo
2.4 Amandla edijithali
UDan Brown Biography
Ukufota: República GT
Uzalelwe ngoJuni 22, 1964 e-Exeter, idolophu yaseNew Hampshire, e-United States, uBrown ngunyana wesazi sezibalo nomqambi womculo ongcwele, indibaniselwano efanelekileyo yombhali owayenokuthi ekuqaleni kweminyaka yoo-2000 aguqule izangqa zobuKrestu ngokusebenzisa ezinye mhlawumbi kungenjalo iimfihlakalo zokomoya.
UBrown wafunda kwiPhillips Exeter Academy naseAmherst College, nangona naye wayenjalo waphila ixesha elithile eSpain, ngokukodwa kwisixeko sase-Asturian saseGijon. Wayehlala naseSeville, apho wayefunda khona eyunivesithi, nangona ikonsathi efanayo iye yaqinisekisa ukuba akukho zirekhodi zikaBrown njengomfundi, mhlawumbi ngenxa yokuba wabhalisa kwikhosi yeMbali yobuGcisa ngexesha lasehlotyeni. Ukwazi ukuba, ngaphandle kokuzoba ikamva elingekude kangako, kwakhokelela kuye kuqala ukuvelisa urekhodo lomculo wabantwana phantsi kwelebheli yeDelliance.
Ngo-1991 wafudukela eHollywood, eCalifornia, apho aqhubeka khona nomsebenzi wakhe njengomdlali wepiyano ngelixa wayesebenza njengomfundisi-ntsapho wesiNgesi nowaseSpain. Kwakungoku ngeli xesha wadibana nenkosikazi yakhe yexesha elizayo, uBlythe Newlon, Uneminyaka elishumi elinesihlanu emdala kunoBrown. Ngexesha lesiqingatha sokuqala sama-90s, uBrown uqhubeke nokurekhoda iingoma kunye nee-albhamu, kubandakanya enye phantsi kwegama iingelosi kunye needemon (kuvakala into?).
Nangona kunjalo, ukuthanda kukaBrown ngoncwadi kwakuza kufika ngehlobo lowe-1993 xa wayehleli kunxweme lwaseTahiti. Kulapho ke wayeza kufumana khona inoveli Icebo losuku lweSidney Sheldon, Ukufunda okhuthaze umbhali wexesha elizayo ukuba abuyisele ikhondo lakhe lomsebenzi ngokuqala ukusebenza kwinoveli yakhe yokuqala, Inqaba yedijithali, itriller yethekhinoloji eyabethwa ngabagxeki kodwa yazinziswa ngempumelelo ephumeleleyo kwezorhwebo. Le ncwadi yokuqala yalandelwa Iingelosi kunye needemon Ngo-2000, isihloko esasinomntu othile uRobert Langdon owayeneempawu zenkolo kwaye ethatha ihlelo le-Illuminati njengabagcini bokuqala bezinye iimfihlelo ezimnyama zembali.
Intshayelelo ye-boom eyayiza kuthetha ngo-2003 Ikhowudi yeDa VinciUmthengisi othengisa kakhulu uthe nangona iimpazamo zayo zembali zakwazi ukushukumisa ama Katolika ngokubeka izibakala ezinje ngobunyani bobudlelwane phakathi kukaMary Magdalene noYesu Krestu, ukuguqulwa kweeVangeli okanye indawo eyiyo yeGrail eNgcwele.
Incwadi etsala amehlo ehlabathi liphela kwaye imele ukuntywiliselwa okokuqala jikelele kwi Uluhlu lweencwadi zikaDan Brown.
Iincwadi ezigqwesileyo zikaDan Brown
Ikhowudi yeDa Vinci
Yapapashwa ngo-2003, Ikhowudi yeDa Vinci ubalisa umanyano phakathi konjingalwazi weesimboli zonqulo URobert Langdon kunye noSophie Neveu, umzukulwana welungu le-Illuminati ekubulaweni kwakhe kutyhila ubukho beGrail eNgcwele ekhangela iimfihlo ezininzi kwimbali yobuKrestu esekwe kufundo lwesibini lweSidlo sangokuhlwa sokugqibela okanye kutshintsho lwembali kunye neziganeko ezichazwe eBhayibhileni. Engaphezulu kwe Iikopi ezizizigidi ezingama-80 zithengisiweIkhowudi yeDa Vinci yeyona mpumelelo kwisaga eneencwadi ezintlanu ezazidlala noRobert Langdon kwaye yahlengahlengiswa kwiscreen esikhulu ngo-2006 UTom Hanks kunye no-Audrey Tautou njengabalinganiswa abaphambili. Ngaphandle kokugxekwa okuninzi le ncwadi ifunyenwe yiCawe kunye nababhali-mbali, iKhowudi yeDa Vinci iseyenye ezona ncwadi zathengiswa kakhulu embalini kunye nesalathiso soncwadi lwembali oluye lwaphinda lwavela kwakhona kwiminyaka elishumi yokuqala yenkulungwane ye-XXI.
Iingelosi kunye needemon
Nangona yapapashwa ngaphambi kweKhowudi yeDa Vinci, Iingelosi kunye needemon waba yimpumelelo ngenxa yokufunyanwa komthengisi othengisa kakhulu ngowama-2003. Kwakhona, uRobert Landon wabalasela kule thriller apho wabizwa liziko lophando laseSwitzerland emva kokufumanisa isidumbu sendoda enophawu olungaqhelekanga olwalumiswe ngomlilo. Isalathiso sokuqala sokubuya kwezinye I-Illuminati isoyikisa ibhombu eya kuqhuma entliziyweni yeVatican. Inoveli, ukuzama kukaBrown ukumanya iikhonsepthi ezimbini ezichaseneyo (okanye mhlawumbi hayi kakhulu) njengoko inzululwazi nenkolo, ngaphandle kokupapashwa ngo-2000, iphumelele ngakumbi kwintengiso emva kokupapashwa kweKhowudi yeDa Vinci kwaye yahlengahlengiswa kwiscreen kwi Ngo-2009 kwakhona noTom Hanks kwindima yeLangdon.
Incwadi yesithathu eneenkwenkwezi uRobert Langdon yapapashwa ngo-2009 incwadi ethengiswa kakhulu ngosuku olunye, uphawu lobushushu obenziwe nguBrown kwishumi leminyaka lokuqala lama-2000. Setha eli xesha eUnited States, ngakumbi eWashington DC,Uphawu olulahlekileyo ikhokelela uLangdon ukuba alandele imikhondo eya kwiPyramidi yeMasonic engcwatyelwe, ngokwentsomi, kwindawo ethile esixekweni.
Ngaphandle kokugxekwa okokuqala kufudumele (ngakumbi ngenxa yokuseta kunye nenkcazo yeendawo eSeville, isixeko apho uninzi lwesiqwenga senzeka khona), Amandla edijithali, Incwadi kaBrown yokuqala epapashwe ngo-1998, yaphela yaba yenye ye Imisebenzi edume kakhulu kaDan Brown. Inoveli yokuthengisa eyahlukeneyo enomlingisi ophambili nguSusan Fletcher, isigcini se-cryptologist ye-NSA eyimfihlo (i-Arhente kaZwelonke yoKhuseleko) ekufuneka iphande ngentsingiselo yekhowudi eyimfihlo kakhulu engenakho ukuyiqonda ngaphandle kwendoda esandula ukubulawa eSeville.
Ipapashwe ngo-2001, Iyelenqe Yayiyincwadi yenoveli yesibini kaDan Brown apho uRobert Langdon wayengafakwanga njenge-protagonist. Endaweni yakhe sifumana uRachel Sexton, umhlalutyi wobukrelekrele ekufuneka etyhile inkohliso ebandakanya ukubonakala kwendawo eyimfihlakalo kwindawo yaseArctic, umsitho onokuthi uxhase uloyiso kunyulo lukamongameli omtsha waseMelika.
Zeziphi ezona ncwadi uzithandayo kuDan Brown?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » UDan Brown Biography kunye neencwadi eziGqwesileyo